सरकारलाइ प्रश्न-के हतियार त्यागेर नै प्रचण्ड वार्तामा आएका थिए ? Globe Nepal News Portal
सरकारलाइ प्रश्न-के हतियार त्यागेर नै प्रचण्ड वार्तामा आएका थिए ?
पहिले पार्टी माथि प्रतिवन्ध कि वार्ता ? यो सवाल आज देखि होइन २०५२ साल देखि चलि आएको हो । राज्यलाइ वार्ताबाट होइन,हिंस्रक ब्यवहार गर्ने जो कोहीलाइ बन्दुकबाट नै तह लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । एउटा सामान्य परिवारकै उदाहरण हेरौं न । यदि कुनै वच्चाले गल्ती गरयो भने हामी त्यसलाइ सम्झाउछौं कि पहिला एक झाप्पुु हान्छौं ? हामी सवै पहिला बच्चालाइ सम्झाउनुपर्छ भन्छौं तर हान्न चाहि पहिला मुुक्का हान्छौं । अर्थात हिंशा भनेको बलियोले कमजोरलाइ गर्ने हो । र,बल भएकोले निकर्वलियोलाइ भुसुनोे नै सम्झन्छ । सम्झाउने फकाउने त गफ मात्र हो । नत्र,२००७सालमा नै ससस्त्र क्रान्ति गरेको,पञ्चायतमा पनि हतियार रउठाएको नेपाली कांग्रेस,झापा आन्दोलनमा मान्छेको टाउको काटेको कम्युनिष्ट,वीपीलाई प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा नै थर्काउन जाने भरतशमशेरको दल सवैले हतियार उठाएकै छन । तर पनि किन यी सवैले हतियार उठाए र जब सत्तामा पुगे तब अर्को दललाइ प्रतिवन्ध लगाउदै र हतियारको दम्भ देखाए त ?
इतिहास फेरि दोहरिएको छ । रिलमा भएको चित्र अगाडी पछाडि गरेर हेरेजस्तो भएको छ । एकहिसावले भन्ने हो भने २०५२साल देखि २०६२सालसम्मको अवस्था दोहरिएको छ ।
गत फागुन २८ गते सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाइ यसको ९ दिनपछि सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको वैठक मार्फत सरकारले चन्दका गतिविधि आपराधिक किसिमको रहेको भन्दै यसलाइ राजनीतिक संगठन मान्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर यसरी आपराधिक संगठन भनेको हप्ता दिनपछि नै सरकारले वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।
तराइमा अलग मधेशको लागि आन्दोलन गर्दे आएका डा.सीके राउतसंग सम्वाद गरि ११ वुदे सम्झौता समेत गरेको सरकारले सोेही दिन विप्लवलाइ लुटेरा समुह भनेको थियो । यसको भोलिपल्ट गृहमन्त्री रामवहादुर थापाले सुर्खेतमा पुगेर सुरक्षा अधिकारीलाइ विप्लव र उनको समुहलाइ राजनीतिक संगठनको रुपमा ब्यवहार नगर्न निर्देशन दिए। यसपछि बल्ल सरकारले पार्टीलाइ नै प्रतिवन्ध लगाएको हो । पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि सरकारले हतियार सहित फेला परेमा विप्लवका कार्यकर्तालाइ गोली प्रहार गर्न निर्देशन नै दिएको थियो । यसपछि विप्लवका कार्यकर्ता समाउने,सर्च अभियानलाइ तिव्रता दिने लगायतका काममा सरकार लागि परेको थियो । तर विहिवार अचानक सरकार प्रवक्ता गोकुलाप्रसाद वास्कोटाले भने वार्ताको लागि विप्लव समुहलाइ आहवान गरे ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाइ प्रतिवन्ध लगाएपछि यसको समर्थन भन्दा ज्यादा विरोध नै भयो । स्वयम सत्तारुढ दलका नेताहरु माधव नेपाल,झलनाथ खनाल सम्मले पनि यसको विरोध गरे । विपक्षी दल कांग्रेस र संसदमा रहेका दलहरु नया शक्ति लगायतका दलले पनि यसको खुलेर विरोध गरे । एक हिसावले भन्ने हो भने नेकपालाइ लगाएको प्रतिवन्धको विरुद्धमा माहौल नै बन्यो । कतिसम्म भने विगतमा माओवादी आन्दोलनका प्रमुख नेता डा.बाबुराम भटटराइले हतियारको बलमा विप्लव नियन्त्रणमा आउछन भन्ने सरकारको सोचमा खोट रहेको बताए।
सत्तारुढ दल हुन वा विपक्षी दल,चाहे जसले सरकारले नेकपालाइ लगाएको प्रतिवन्धको विरोध गरेपनि कसैले पनि हतियारवन्द आन्दोलनको समर्थन भने गरेका छैनन । हिंशाले समाधान नदिने कुरा राजनीतिकर्मी देखि वुद्धिजीविसम्म सहमत देखिन्छन संगै उनीहरु कुनै पनि पार्टीलाइ प्रतिवन्ध लगाएर वा सैन्यबल प्रयोग गरेर मात्र पनि समाधान नहुने कुरामा पनि ढुक्क देखिन्छन । यति सामान्य ज्ञान त सरकारलाइ पनि नभएको भने होइन तर पनि सरकारले किन पार्टी माथि नै प्रतिवन्ध लगायो त ?
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गाउ गाउमा चन्दा उठाउने,जग्गा हडप्ने लगायतको काम नगरेको होइन र,यस्तो कामको विरोध नभएको पनि होइन । तर,एकैपटक पार्टी प्रतिवन्ध लगाउने कि वार्ता गरेर समाधान खोज्ने भन्ने विषयमा मात्र अहिले एकमत हुन नसकेको हो । यसैले पार्टी प्रतिवन्ध लगाएको हप्ता दिनपछि सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ । तर,वार्ताको लागि सरकारले एउटा सर्त पनि राखेको छ - कि वार्ता अघि विप्लवले हतियार विसाउन । के यो शर्त विप्लव पक्षले मान्लान ? माओवादी युद्धताका नै दस बर्षसम्म यस्ता विषयमा प्रशस्त सवालजवाफ नभएका होइनन । तर के त्यतिवेला दिल्लिमा १२ वुदे हुनुअघि नैै माओवादीले हतियार विसाएको थियो ?विप्लवकाे शक्ति हतियार भइसक्याे।सर्पकाे शक्ति विष हाे। र,के विष नभएपछि सर्प रहन्छ ?